राति नङ काट्नु शुभ कि अशुभ ? | Butwal Dainik
४४१ पटक पढिएको
हाम्रो परम्परा के छ भने, साँझ परेपछि कुच्चो लगाउनु हुन्न, जुत्ता-चप्पल उल्टो पारेर राख्नु हुँदैन ।
यसैगरी पितापूर्खाहरु भन्छन्, राति नङ काट्नु हुँदैन ।
हाम्रो घरका अग्रजहरुले हामीलाई सधैं सम्झाइरहने कुरा हो राति नङ काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा । तर, यसको पछाडि के वैज्ञानिक कारण छ त ? यो कुरा हामीलाई कसैले पनि बताउने गरेका छैनन् । के वास्तवमै कुनै त्यस्तो कारण छ, जसले राति नङ काट्नाले अशुभ हुन्छ ?
पहिलाको समय र आजको आधुनिक युगमा निकै नै अन्तर छ । त्यसैगरी पुरानो समयका मानिस तथा नयाँ समयका मानिसहरुको विचारहरुमा पनि निकै अन्तर छ । जबसम्म नयाँ पुस्ताले हरेक विचारसँग सम्बन्धित तर्क भेट्दैनन्, तबसम्म उनीहरु त्यो तर्कलाई मान्न तयार हुँदैनन् ।
यसैबीच राति नङ नकाट्नुका पछाडि यी तीन मुख्य कारणहरु छन् ।
नङ हाम्रो औंलाहरुमा भएको एउटा मजबुत पत्र हो । जसले हाम्रो कोमल औंलाहरुलाई निकै हदसम्म बचाएर राख्छ । त्यसैले जब हामी नङ काट्छौं । तब हामीले विशेष ध्यानदिनु पर्ने कुरा के हुन्छ भने हाम्रा औंलाहरुमा कुनै पनि प्रकारको हानि पुग्नु हुँदैन